Dibadbaxyo hareeyay dalka Tuuniisiya - Worldnews.com
Waxa uu dibadbaxyada ku tilmaamay kuwo qalalaase salka ku haya oo aanan
Tuuniisiya oo 70 milyan oo doolar ku caawin doonta qoysaska saboolka ah
Dowladda Tuuniisiya ayaa ku dhawaaqday in 70 milyan oo doolar oo dheeraad ah ay ku bixin doonto caawinta qoysaska uu yar yahay dakhliga soo gala. Arrintan ayaa imanaysa...
Madaxwaynaha dalka Tunisia ayaa maanta galinka dambe lagu wadaa in uu booqdo dagmooyiinkii dhawaan ay ka dhaceen dibadbaxyada. Madaxwayne Beji Caid Essebsi ayaa khudbad ka...
Boqolaal qof oo dalka Iiraan lagu xiray
Arday jaamacadeed oo gaaraysa sagaashan arday ayaa ka mid ah kun qof oo dalka Iiraan lagu xiray maalmihii la soo dhaafay. Waxaa warkan xaqiijiyay xilibaan ka mid ah kuwa...
Amit dhanka ke dailog
jeekeey oo Guuldaro kutimit Dhanka Shukaansiga
Dhanka Ki Chhori Ne Kiya Dhmal
Daru Party Dance By Dhanka
Chilar Dhanka Party
sidee ku ogaan gartaa in eey kuu baahantahay xaaskaaga dhanka sariirta
Daawo : Farmaajo oo ku qaaday dagaal siyaasadeed Somaliland, dhanka beesha caal
Arday jaamacadeed oo gaaraysa sagaashan arday ayaa ka mid ah kun qof oo dalka Iiraan lagu xiray maalmihii la soo dhaafay. Waxaa warkan xaqiijiyay xilibaan ka mid ah kuwa isbadal-doonka ah ee dowladda ka soo horjeeda. Mohmoud Sadeghi ayaa intaasi raaciyay in ardayda la xiray ay ahaayeen kuwo dibadbaxayay. Banaanbaxyadan Dowladda looga soo horjeedo waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay...
Ciidammada ammaanka ee waddanka Tuuniisiya ayaa xiray wiil uu abti u ahaa ninkii qaaday weerarkii Berlin ee Anis Amri iyo laba qof oo kale oo laga shakiyay, waxaa sidaa sheegay saraakiisha ammaanka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tuunisiya ayaa sheegtay in saddexdaasi qof ee ay da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 27, ay ka tirsan yihiin "shabakad...
Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaas ee Qasa ayaa sheegtay in ciidamada Israel toogasho ku dileen saddex Falastiiniyiin ah oo ka qayb qaadanayey mudaharaad ballaadhan oo lagaga soo horjeedo gidaarka Israel. Mudaharaadkani waxa la dhigayey Jimcihii shanaad ee xidhiidh. Qofkii ugu horeeyey ee dhimashadiisa la xaqiijiyaa waxa uu haa Cabdulsalaam Bakr oo 29 jir ah, waxaanay...
Dibadbaxyo ballaaran oo loogaga soo horjeedo dowladda Iiraan oo Khamiistii ka bilowday hal magaalo ayaa haatan ku fiday magaalooyinka waa weyn ee dalka. Tiro badan ayaa lagu soo warramayaa inay isugu soo baxday magaalada Rasht ee waqooyiga ku taal, iyo Kermanshah oo galbeedka dhacda, halka dibadbaxayaal aan sidaa u badneyn ay isugu soo baxeen magaalooyinka Isfahan, Hamadan iyo...
Mudaharaadka Itoobiya ka dhacay Axaddii ee ay ka qeybqaateen kumannaanka ruux ee ku sugan magaalada Gondar ee gobolka Amxaarada ayaa ah tusaale naadir ah oo loo soo qaadan karo mudaharaadyada dalkaasi ka dhaca ee dawladda lagaga soo horjeedo. Waxaa lagu abaabulay baraha bulshada balse kooxina ma aysan sheeganin masuuliyadda dibadbaxaas. Mudaharaadkan ayaa yimid laba todobaad...
dhanka samaj in rajasthan
The great Dhanka of Rajasthan...
Video from yogeshkumar66207...
The great Dhanka of Rajasthan
Video from yogeshkumar66207